Dutọ oge Windows Shutdown ma ọ bụ Malitegharịa ekwentị | Akụkọ akụrụngwa
5 Ndi ozo maka ịhazi usoro mmechi Windows ma ọ bụ bidogharịa
Enwere ọrụ mmadụ ga-ahapụrịrị kọmputa nke ya iji mezue ọrụ nke ga-ewe obere oge. Anya isi na ọ bụ ugbua etiti abalị na ihe fọrọ nke nta ka anyị anyi agaghi enwe ime ihe obula na ntinye kama nke ahụ, ịhapụ Windows kọmputa anyị ka ọ rụọ ọrụ, anyị nwere ike iji ụzọ ole na ole ọzọ nye iwu kọmputa ahụ ka ọ gbanyụọ mgbe oge ụfọdụ gasịrị.
Ngwaọrụ ndị anyị ga-ekwu n'okpuru ga-enyere anyị aka inwe ike ịhazi oge nke kọmputa kọmputa nke Windows ga-agbanyụrịrị, ihe a ga-agbakọ nke ọma n'ihi na ọ bụghị na anyị nwere ike ịhapụ ọrụ niile ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ ( gbanyụọ kọmputa ahụ), emechara ya emechaa. Agbanyeghị, na nke ọ bụla nke ndị ọzọ na anyị ga-kwuru n'okpuru ị nwere ike nweta nye Windows iwu ka ịbanye n'ime ezumike, nke mere na ọrụ agaghị efu n'ihi akụrụngwa anaghị emechi ya kpamkpam.
1. Mechie oge ngụ oge
A na - ahụ ezigbo ihe ọzọ na ngwa ọrụ akpọrọ "Vista Shutdown Timer", ebe ọ dakọtara n'ọtụtụ sistemụ arụmọrụ sitere na Windows 2000 n'ihu. The interface bụ kpam kpam ọrụ-enyi na enyi na ya mere, a ga-enweghị oge nke anyị ga-enwe mgbagwoju anya na ụfọdụ n'ime ya ọrụ.
Naanị ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ ọrụ ọ bụla site na akara ngosi ha dị n’elu mmanya; nke a pụtara na ị nwere ike ịhọrọ igbachi kọmputa, hibernate, ụra, Malitegharịa ekwentị ma ọ bụ nanị gbanyụọ ya. Nhọrọ ọ bụla nhọrọ ole na ole ọzọ ga - apụta na ala, nke ga - enyere gị aka ịkọwa oge nke ekwesịrị ime ihe; Na mgbakwunye, ngwa ahụ ga - enyere gị aka ịkọwapụta oge a kapịrị ọnụ yana ụbọchị pụrụ iche nke ịchọrọ ka a rụọ ọrụ a.
2. Amamihe Onwe Mwepu
Ọ bụ ezie na iji interface dị iche iche dị iche na nke ọzọ anyị kpọtụrụ aha n'elu, Amamihe Mbugharị Na-enyekwa anyị ohere ịnweta mmemme yiri nke a.
N'akụkụ aka ekpe, ị ga - ahọrọ onye ọ bụla, ebe site na mpaghara aka nri ị nwere ike ịkọwa oge na ụbọchị ọ ga - eme. Can nwere ike ịkọwapụta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ a kwa ụbọchị ma ọ bụ naanị n'oge ụfọdụ nke ụbọchị.
3. Airytec Gbanyụọ
Ọzọ ọzọ na-akpali ọzọ iji bụ "Airytec Gbanye Gbanyụọ", ebe anyị nwere a dị mfe na minimalist interface na, Otú ọ dị, na-enye anyị zuru atụmatụ iji mgbe ị na-eme ụdị mmemme a.
You nwere ike kọwaa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọrụ a nyere kwa izu ma obu kwa ubochi ma n’oge obula, nke a si na mpaghara elu nke interface. Nwekwara ike ịhọrọ ụdị ọrụ ahụ, ya bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ka kọmputa ahụ malitegharịa, gbanyụọ, gbochie ya ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya.
4. TimeComX Ndabere
N'iji nlezianya mara mma ma dị iche na nke ndị ọzọ gara aga, «TimeComX Basic» na nke mbụ na-enye anyị ohere iji obere oge ezumike fọdụrụ na-efu maka otu ọrụ a ga-arụ.
Akụkụ na-adọrọ mmasị bụ akụkụ dị ala, ebe ị nwere ike ịtụ ngwá ọrụ a lee "nseta ihuenyo" nke desktọọpụ niile ma ọ bụ ngwá ọrụ dị n'oge ahụ, 30 sekọnd tupu imezu ọrụ ahụ e kenyere.
5. IGBOB WinOFF
Anyị ahapụwo nhọrọ ikpeazụ a maka nke ikpeazụ n'ihi otu esi arụ ọrụ mgbagwoju anya ya. Anyị nwere ike iji mesie ya obi ebe a enwere ihe niile ịhazi ọrụ dika nke anyị kpọtụrụ aha site na mbido.
A na-ahazi ihe niile dabere na taabụ dị iche iche ma na-akwado ya site na ogwe ọrụ na elu. Nwere ike igwu na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nhọrọ egosiri na taabụ ọ bụla, nke ga - enyere gị aka mmemme a pụrụ iche ọrụ dabere na ọrụ ị na-arụ na kọmputa nkeonwe n'oge ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » 5 Ndi ozo maka ịhazi usoro mmechi Windows ma ọ bụ bidogharịa
KeyLoggers: otu esi eji ha wee hụ ọrụ nke pere mpe na Windows
Etu esi achọta vidiyo, ngwa ma ọ bụ ọtụtụ ihe na weebụ?